> Resource > Android > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Pictures ka HTC Cajiib ah
Qaado sawiro la telefoonka smart saaxiibada la wadaaga si degdeg ah iyada oo loo marayo Facebook ama Twitter. Waxa ay u muuqataa wax caadi ah in nolol maalmeedkeena ah, oo aqbalay by dad badan oo ay la socdaan horumarka telefoonada smart. Waa arrin habboon, si fudud oo deg deg ah. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay sidoo kale u fududahay in ay lumiyaan photos kuwa ay takhalusid shil, khaladaad card SD ama sababo kale. Qaado telefoonada HTC Cajiib ah oo tusaale u ah, sida aad u soo kaban karto, sawirada tirtiray ka HTC Cajiib ah marka kuwa sawirada lumay muhiimka kuu ah? Haddii aad hab helay, waxaa halkan wadaagaan. Haddii aan, ka akhri si loo helo mid ka mid ah.
Sidee inuu ka soo kabsado photos tirtiray HTC Cajiib ah
Wax First hore: wixii macluumaad cusub ha la gelin ka dib markii la tirtiro sawirrada ee aad taleefan si looga hortago in xogta asalka ka overwritten.
Marka aad tirtirto sawirada, ay kaliya ku calaamadeysan yihiin "tirtiray" ah ee aad taleefan oo la raadsan karaa HTC qalab kabashada Cajiib ah. Sidaa darteed, waa mid aad u muhiim ah in si fiican aad telefoonka. Marka sawirada tirtiray yihiin overwritten, waxaad iyaga oo aan dib ugu heli sinaba.
Hadda, aad u hesho barnaamijka HTC xogta Cajiib ah: Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac
Tani kabashada software sawir kuu ogolaanaya in aad ka bogsato oo keliya ma aha sawiro, laakiin sidoo kale videos iyo files audio in aad si qalad ah la tirtiro, formatted ama lumay ay sabab u tahay sababo kale oo ka HTC phone Cajiib ah. Isku day version maxkamad free of HTC software kabashada Cajiib ah hadda hoos ku qoran.
Step1. Connect aad HTC phone Cajiib ah in kombiyuutarka
Si aan ku bilaabo, xiriiriyaan HTC phone Cajiib ah meesha aad sawiro ama videos guuldarro kombiyuutarka, iyo in la hubiyo waxa lagu ogaan karaa oo u muuqda sida warqad drive ee "My Computer" a. Markaas aan bilowno barnaamij oo guji "Start" ee suuqa kala aasaasiga ah sida ay raacaan si ay u bilaabaan HTC kabashada Cajiib ah.
Step2. Dooro HTC Cajiib ah oo ay bilaabaan iskaanka
Halkan, aad HTC Cajiib ah lagu soo bandhigi doonaa sida warqad drive ah. Waxaa Dooro oo guji "Scan" si ay u baadhaan files lumay ee aad HTC phone Cajiib ah.
Step3. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan photos tirtiray, videos ka HTC phone Cajiib ah
Marka scan ka baxayo, dhammaan faylasha recoverable lagu soo bandhigi doonaa noocyada file oo kala duwan sida Audio, Photo iyo Video. Waxaad ku eegaan karo iyo hubi iyaga oo dhan inuu ka soo kabsado ka mid ah.
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday aad HTC phone Cajiib ah. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.
Video tutorial ah HTC kabashada Cajiib ah